ဆိုဖာပေါ်က အစွန်းအထင်းတွေကို မီးဖိုဆောင်သုံးပစ္စည်းတွေအသုံးပြုပြီး ဖယ်ရှားမယ် - Property Knowledge in Myanmar | iMyanmarHouse.com
ဆိုဖာပေါ်က အစွန်းအထင်းတွေကို မီးဖိုဆောင်သုံးပစ္စည်းတွေအသုံးပြုပြီး ဖယ်ရှားမယ်
8 Jan 2020 10:39 am တွင် တင်ခဲ့သည်
441 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ ပြီး
သင်သည် ဆိုဖာပေါ်ထိုင်ကာ ရုပ်မြင်သံကြားကြည့်ရင်း ပီဇာမုန့်စားနေချိန် ခုံပေါ်သို့ ဒိန်ခဲနှစ်အချို့  ပြုတ်ကျသွားခြင်းမျိုး။ ဖောင်တိန်ဖြင့် စာရေးရင်း အိပ်ပျော်သွားရာမှ အမြဲထိုင်သည့် ဆိုဖာပေါ် မင်များ စွန်းပေသွားခြင်းမျိုး။ ဝိုင်သောက်ရင်း ဝိုင်အချို့  ဖိတ်စဉ်သွားခြင်းမျိုး။ သင့်နေအိမ်၏ အချက်အခြာနေရာဖြစ်သော ဧည့်ခန်းနေရာမျိုးတွင် အစွန်းအထင်းများဖြစ်လာခြင်းမှာ အမြင့်မတင့်တယ်သဖြင့် အလျင်မြန်ဆုံး ဖယ်ရှားရမည်သာ ဖြစ်သည်။ အောက်တွင် သင့်ပရိဘောဂများကို အစွန်းအထင်းအမျိုးမျိုး ဖယ်ရှားပေးနိုင်ကာ အသစ်အတိုင်းပြန်လည်ရရှိစေနိုင်မည့် နည်းလမ်းများကို ဖော်ပြပေးထားပါသည်။ အစွန်းအထင်းများ မဖယ်ရှားမီတွင် သင်၏ ဆိုဖာနှင့်ပတ်သက်သော လမ်းညွှန်ချက်များကို ဖတ်ရှုထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။
စံချိန်မီ ဆိုဖာများတွင် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန် လမ်းညွှန်ချက်များ ရေးသားပေးထားလေ့ရှိပြီး အများအားဖြင့် ခုံအောက်တွင် ပါဝင်လေ့ရှိသည်။
အဆိုပါလမ်းညွှန်ချက်များကို ဖတ်ရှုခြင်းအားဖြင့် ဆိုဖာခုံများကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရာတွင် သတိပြုရမည့်အချက်များကို သိရှိထားနိုင်ပြီး ဥပမာအားဖြင့် ရေဖြင့် သန့်ရှင်းရေးမလုပ်ရန် တားမြစ်ထားခြင်းမျိုး ဖြစ်သည်။ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် လမ်းညွှန်ကုတ်ဒ်အချို့ မှာ-
W- ၏ အဓိပ္ပာယ်မှာ အစို (သို့မဟုတ်) ရေဖြင့်သာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ
S- ၏ အဓိပ္ပာယ်မှာ အခြောက်လျှော်ခြင်းနည်းလမ်းကိုသာ သုံးပါ
SW- ၏ အဓိပ္ပာယ်မှာ အစိုနှင့် အခြောက်လျှော်နည်း ၂ မျိုးလုံး သုံးနိုင်သည်
X- ၏ အဓိပ္ပာယ်မှာ ကျွမ်းကျင်သူများဖြင့်သာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန် (သို့မဟုတ်) ဖုန်စုပ်စက်ကိုသာ အသုံးပြုရန် ဖြစ်သည်။ X ဖင့် ရေးသားဖော်ပြထားသည်များအတွက် အောက်ဖော်ပြပါ နည်းလမ်းများ အသုံးပြုနိုင်မည်မဟုတ်ဘဲ ကျွမ်းကျင်သူများဖြင့်သာ သန့်ရှင်းရေး ပြုလုပ်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်၏ခုံတွင် လမ်းညွှန်ချက်များ မပါဝင်ပါက ခုံ၏ လူမမြင်နိုင်သည့် ထောင့်တစ်နေရာရာကို စမ်းသပ်သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ကြည့်ရမည် ဖြစ်သည်။
ထိုသို့ စမ်းသပ်ကြည့်ရာတွင် ပျက်ဆီးမှုများမရှိမှသာ အစွန်းအထင်းများ ဖယ်ရှားသန့်စင်မှုကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
အောက်ပါနည်းလမ်းအများအပြားတွင် ရေကို အသုံးပြုသည့်နည်းလမ်းများပါဝင်ရာ သင်၏ ဆိုဖာခုံမှာ ရေကို အသုံးပြုသန့်ရှင်းရေးလုပ်နိုင် သည့်ခုံမျိုး ဖြစ်ရန် လိုပါသည်။
ဒုတိယ အချက်မှာ သန့်ရှင်းရေးမလုပ်မီတွင် ဖုန်စုပ်စက်ဖြင့် သန့်ရှင်းပေးခြင်းမျိုး အမြဲပြုလုပ်ပါ။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် ဖုန်နှင့် မုန့်အစအနများ၊ အကြွင်းအကျန်များမှတဆင့် အတွင်းပိုင်းအထိ စိမ့်ဝင်သွားခြင်းမျိုးမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
၁။ အစားအသောက်များမှ အစွန်းအထင်းများ
ရေနှင့် ဆပ်ပြာ။ ဆိုဖာခုံများ၏ အစွန်းအထင်း အများစုကို ရေနှင့် ဆပ်ပြာကို သုံးကာ ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါသည်။ ရေမြှုပ်ဖော့တုံး (သို့မဟုတ်) သန့်ရှင်းသော အဝတ်စတစ်ခုခုကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အစွန်းအထင်းတွင် နို့ထွက်ကုန်များ မပါဝင်ပါက ရေနွေးကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ နို့ထွက်ကုန်များ ပါလျှင်မူ ပရိုတိန်းအချဉ်ပေါက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ရေအေးကိုသာ အသုံးပြုပါ။ အကယ်၍ အစွန်းအထင်းတွင် နို့ထွက်ကုန် ပါ၊ မပါ မသေချာလျှင် ရေအေးကိုသာ သုံးပါ။ အကယ်၍ ရေ၊ ဆပ်ပြာတို့ဖြင့် မဖယ်ရှားနိုင်ပါက ဆပ်ပြာရည်ကို အသုံးပြုပါ။ အစွန်းအထင်းပေါ်တွင် ဆပ်ပြာရည် နာရီဝက်ခန့် ထားရှိပြီးမှ ရေမြှုပ်ဖြင့် စုပ်ယူသန့်စင်ပေးပါ။ ကြီးမားသည့် အစွန်းကွက်များအတွက် အစပ်ဘက် အစွန်ဘက်မှ စတင်ကာ သန့်စင်ပေးပါ။
အစွန်းအကွက်ပေါ်တွင် မုန့်ဖုတ်ဆော်ဒါမှုန့်ကို ဖြူးပါ။ (သို့မဟုတ်) မုန့်ဖုတ်ဆော်ဒါကို ရေဖြင့် ရောနယ်ကာ အနှစ်ပြုလုပ်ပြီး အစွန်းနေရာအပေါ် သုတ်လိမ်းပါ။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အစွန်းတွင်ပါဝင်သော ဆီများကို ချွတ်ပေးနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ မုန့်ဖုတ်ဆော်ဒါဖြူးခြင်း၊ သုတ်လိမ်းခြင်းများ ပြုလုပ်ပြီး အနည်းဆုံး ၁၀ မိနစ်နှင့်အထက် ထားရှိရမည် ဖြစ်သည်။ ယင်းနောက် ဆော်ဒါမှုန့်များကို ဖုန်စုပ်စက်ဖြင့် ဖယ်ရှားပါ။ ကျန်နေသေးသော အစွန်းနေရာများကို ဗော့ဒ်ကာဖြင့် သုတ်လိမ်းပေးပါ။ (သို့မဟုတ်) ပန်းကန်ဆေးဆပ်ပြာဖြင့် သုတ်လိမ်းကာ သွားတိုက်တံအသုံးပြုပြီး တိုက်ချွတ်ပေးပါ။ နောက်ဆုံးတွင် တစ်သျှူးစက္ကူအစိုဖြင့် စုပ်ယူသန့်စင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
ဝိုင်ဖိတ်စဉ်ကျမှုကြောင့် စွန်းထင်းမှုများဖြစ်ပေါ်ပါက ဆော်ဒါရည်ဖြင့် အစွန်းနေရာတွင် သုတ်ထားပြီး သန့်ရှင်းသော အဝတ်စဖြင့် စုပ်ယူပါ။ ထိုနည်းမှာ အမှန်တကယ် အလုပ်ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ ထိုနည်းဖြင့်လည်း အစွန်းမကျွတ်ပါက ရှာလကာရည် လဘက်ရည်တစ်ဇွန်းနှင့် ဆပ်ပြာမှုန့် လဘက်ရည်တစ်ဇွန်းတို့ကို ရေအေးဖြင့်ရောစပ်ပါ။ အဆိုပါ ရောစပ်အရည်ဖြင့် အစွန်းနေရာကို သန့်ရှင်းသော အဝတ်စဖြင့် တို့ပေးပြီး ရေသန့်ဖြင့် ပြန်လည်ဆေးကြောလိုက်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
၄။ ဘီယာနှင့် ကော်ဖီအစွန်းအထင်းများ
ဘီယာစွန်းပေခြင်းများအတွက် ဦးစွာအားဖြင့် အစွန်းထင်းနေရာကို ရေခဲတုံးငယ်ဖြင့် ပွတ်ပေးပါ။ ယင်းနောက် ဆပ်ပြာရည် လဘက်ရည်တစ်ဇွန်းခန့်ကို ရေနွေးဖြင့်ရောစပ်ကာ တစ်သျှူးစက္ကူဖြင့် သုတ်ပေးရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ကော်ဖီအစွန်းအထင်းများအတွက်လည်း အဆိုပါနည်းစနစ်အတိုင်း သန့်ရှင်းပေးနိုင်ပြီး ကော်ဖီတွင်မူ ရေခဲဖြင့် ပွတ်ပေးသည့်အဆင့်ကို ချန်ထားနိုင်ပါသည်။
ဆိုဖာများပေါ်တွင် မင်စွန်းထင်းခြင်းဖြစ်ပေါ်ပါက ဦးစွာအားဖြင့် စွန်းပေသည့်နေရာကို အရက်ပျံလောင်းပေးပါ။ ပြီးလျှင် စွန်းပေနေသော အကွက်နေရာကို သန့်ရှင်းသောအဝတ်စ၊ တစ်သျှူးစက္ကူဖြင့် စုပ်ယူရမည်ဖြစ်ပြီး အပြင်အစပ်နေရာမှ စတင်ကာ အစွန်း၏ အလယ်ဗဟိုဘက်သို့ တိုးလာရမည် ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင့်တွင် အခြောက်လျှော်သည့် ဆေးရည်ရှိပါကလည်း အဆိုပါဆေးရည်ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ မည်သည့်ဆေးရည်ကို သုံးသည်ဖြစ်စေ သတိပြုရမည်မှာ အစွန်းကွက်ကို ပွတ်တိုက်ခြင်းမပြုရန် သတိပြုရမည်ဖြစ်ပြီး ပွတ်တိုက်လိုက်ပါက မင်များ ပိုမိုပျံ့ နှံ့သွားမည် ဖြစ်သည်။
၆။ အိမ်မွေးတိရ စ္ဆာန်များ အညစ်အကြေးစွန့်သွားခြင်း
ရေနှင့် ရှာလကာရည်ကို တစ်ဝက်စီရောစပ်ကာ အစွန်းအထင်းနေရာကို အဝတ်စုတ်ဖြင့် တို့ကာ စုပ်ယူပေးပါ။ စိုထိုင်းမှု များစွာလျော့ကျသွားသည်အထိ စုပ်ယူသန့်ရှင်းပေးရမည်ဖြစ်သည်။ ယင်းနောက် အစွန်းအထင်းဖြစ်ခဲ့သောနေရာပေါ်တွင် မုန့်ဖုန်ဆော်ဒါ ဖြူးထားလိုက်ပါက အနံ့အသက်များကို စုပ်ယူဖယ်ရှားပေးနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ အစွန်းနေရာ ခြောက်သွေ့သွားပါက ဖုန်စုပ်စက်ဖြင့် ဆော်ဒါမှုန့်များကို သန့်ရှင်းပေးလိုက်ပါ။
သငျသညျ ဆိုဖာပျေါထိုငျကာ ရုပျမွငျသံကွားကွညျ့ရငျး ပီဇာမုနျ့စားနခြေိနျ ခုံပျေါသို့ ဒိနျခဲနှဈအခြို့ ပွုတျကသြှားခွငျးမြိုး။ ဖောငျတိနျဖွငျ့ စာရေးရငျး အိပျပြျောသှားရာမှ အမွဲထိုငျသညျ့ ဆိုဖာပျေါ မငျမြား စှနျးပသှေားခွငျးမြိုး။ ဝိုငျသောကျရငျး ဝိုငျအခြို့ ဖိတျစဉျသှားခွငျးမြိုး။ သငျ့နအေိမျ၏ အခကျြအခွာနရောဖွဈသော ဧညျ့ခနျးနရောမြိုးတှငျ အစှနျးအထငျးမြားဖွဈလာခွငျးမှာ အမွငျ့မတငျ့တယျသဖွငျ့ အလငျြမွနျဆုံး ဖယျရှားရမညျသာ ဖွဈသညျ။ အောကျတှငျ သငျ့ပရိဘောဂမြားကို အစှနျးအထငျးအမြိုးမြိုး ဖယျရှားပေးနိုငျကာ အသဈအတိုငျးပွနျလညျရရှိစနေိုငျမညျ့ နညျးလမျးမြားကို ဖျောပွပေးထားပါသညျ။ အစှနျးအထငျးမြား မဖယျရှားမီတှငျ သငျ၏ ဆိုဖာနှငျ့ပတျသကျသော လမျးညှနျခကျြမြားကို ဖတျရှုထားရမညျဖွဈပါသညျ။
စံခြိနျမီ ဆိုဖာမြားတှငျ သနျ့ရှငျးရေးလုပျရနျ လမျးညှနျခကျြမြား ရေးသားပေးထားလရှေိ့ပွီး အမြားအားဖွငျ့ ခုံအောကျတှငျ ပါဝငျလရှေိ့သညျ။
အဆိုပါလမျးညှနျခကျြမြားကို ဖတျရှုခွငျးအားဖွငျ့ ဆိုဖာခုံမြားကို သနျ့ရှငျးရေးလုပျရာတှငျ သတိပွုရမညျ့အခကျြမြားကို သိရှိထားနိုငျပွီး ဥပမာအားဖွငျ့ ရဖွေငျ့ သနျ့ရှငျးရေးမလုပျရနျ တားမွဈထားခွငျးမြိုး ဖွဈသညျ။ သနျ့ရှငျးရေးလုပျခွငျးနှငျ့ စပျလဉျြးသညျ့ လမျးညှနျကုတျဒျအခြို့မှာ-
W- ၏ အဓိပ်ပာယျမှာ အစို (သို့မဟုတျ) ရဖွေငျ့သာ သနျ့ရှငျးရေးလုပျပါ
S- ၏ အဓိပ်ပာယျမှာ အခွောကျလြှျောခွငျးနညျးလမျးကိုသာ သုံးပါ
SW- ၏ အဓိပ်ပာယျမှာ အစိုနှငျ့ အခွောကျလြှျောနညျး ၂ မြိုးလုံး သုံးနိုငျသညျ
X- ၏ အဓိပ်ပာယျမှာ ကြှမျးကငျြသူမြားဖွငျ့သာ သနျ့ရှငျးရေးလုပျရနျ (သို့မဟုတျ) ဖုနျစုပျစကျကိုသာ အသုံးပွုရနျ ဖွဈသညျ။ X ဖငျ့ ရေးသားဖျောပွထားသညျမြားအတှကျ အောကျဖျောပွပါ နညျးလမျးမြား အသုံးပွုနိုငျမညျမဟုတျဘဲ ကြှမျးကငျြသူမြားဖွငျ့သာ သနျ့ရှငျးရေး ပွုလုပျနိုငျမညျ ဖွဈသညျ။
အကယျ၍ သငျ၏ခုံတှငျ လမျးညှနျခကျြမြား မပါဝငျပါက ခုံ၏ လူမမွငျနိုငျသညျ့ ထောငျ့တဈနရောရာကို စမျးသပျသနျ့ရှငျးရေးပွုလုပျကွညျ့ရမညျ ဖွဈသညျ။
ထိုသို့ စမျးသပျကွညျ့ရာတှငျ ပကျြဆီးမှုမြားမရှိမှသာ အစှနျးအထငျးမြား ဖယျရှားသနျ့စငျမှုကို ဆကျလကျလုပျဆောငျရမညျ ဖွဈပါသညျ။
အောကျပါနညျးလမျးအမြားအပွားတှငျ ရကေို အသုံးပွုသညျ့နညျးလမျးမြားပါဝငျရာ သငျ၏ ဆိုဖာခုံမှာ ရကေို အသုံးပွုသနျ့ရှငျးရေးလုပျနိုငျ သညျ့ခုံမြိုး ဖွဈရနျ လိုပါသညျ။
ဒုတိယ အခကျြမှာ သနျ့ရှငျးရေးမလုပျမီတှငျ ဖုနျစုပျစကျဖွငျ့ သနျ့ရှငျးပေးခွငျးမြိုး အမွဲပွုလုပျပါ။ ထိုသို့ပွုလုပျခွငျးအားဖွငျ့ ဖုနျနှငျ့ မုနျ့အစအနမြား၊ အကွှငျးအကနျြမြားမှတဆငျ့ အတှငျးပိုငျးအထိ စိမျ့ဝငျသှားခွငျးမြိုးမှ ကာကှယျပေးနိုငျမညျ ဖွဈသညျ။
၁။ အစားအသောကျမြားမှ အစှနျးအထငျးမြား
ရနှေငျ့ ဆပျပွာ။ ဆိုဖာခုံမြား၏ အစှနျးအထငျး အမြားစုကို ရနှေငျ့ ဆပျပွာကို သုံးကာ ဖယျရှားပေးနိုငျပါသညျ။ ရမွှေုပျဖော့တုံး (သို့မဟုတျ) သနျ့ရှငျးသော အဝတျစတဈခုခုကို အသုံးပွုနိုငျပါသညျ။ အစှနျးအထငျးတှငျ နို့ထှကျကုနျမြား မပါဝငျပါက ရနှေေးကို အသုံးပွုနိုငျသညျ။ နို့ထှကျကုနျမြား ပါလြှငျမူ ပရိုတိနျးအခဉျြပေါကျခွငျးမှ ကာကှယျရနျ ရအေေးကိုသာ အသုံးပွုပါ။ အကယျ၍ အစှနျးအထငျးတှငျ နို့ထှကျကုနျ ပါ၊ မပါ မသခြောလြှငျ ရအေေးကိုသာ သုံးပါ။ အကယျ၍ ရေ၊ ဆပျပွာတို့ဖွငျ့ မဖယျရှားနိုငျပါက ဆပျပွာရညျကို အသုံးပွုပါ။ အစှနျးအထငျးပျေါတှငျ ဆပျပွာရညျ နာရီဝကျခနျ့ ထားရှိပွီးမှ ရမွှေုပျဖွငျ့ စုပျယူသနျ့စငျပေးပါ။ ကွီးမားသညျ့ အစှနျးကှကျမြားအတှကျ အစပျဘကျ အစှနျဘကျမှ စတငျကာ သနျ့စငျပေးပါ။
အစှနျးအကှကျပျေါတှငျ မုနျ့ဖုတျဆျောဒါမှုနျ့ကို ဖွူးပါ။ (သို့မဟုတျ) မုနျ့ဖုတျဆျောဒါကို ရဖွေငျ့ ရောနယျကာ အနှဈပွုလုပျပွီး အစှနျးနရောအပျေါ သုတျလိမျးပါ။ ရညျရှယျခကျြမှာ အစှနျးတှငျပါဝငျသော ဆီမြားကို ခြှတျပေးနိုငျရနျဖွဈသညျ။ မုနျ့ဖုတျဆျောဒါဖွူးခွငျး၊ သုတျလိမျးခွငျးမြား ပွုလုပျပွီး အနညျးဆုံး ၁၀ မိနဈနှငျ့အထကျ ထားရှိရမညျ ဖွဈသညျ။ ယငျးနောကျ ဆျောဒါမှုနျ့မြားကို ဖုနျစုပျစကျဖွငျ့ ဖယျရှားပါ။ ကနျြနသေေးသော အစှနျးနရောမြားကို ဗော့ဒျကာဖွငျ့ သုတျလိမျးပေးပါ။ (သို့မဟုတျ) ပနျးကနျဆေးဆပျပွာဖွငျ့ သုတျလိမျးကာ သှားတိုကျတံအသုံးပွုပွီး တိုကျခြှတျပေးပါ။ နောကျဆုံးတှငျ တဈသြှူးစက်ကူအစိုဖွငျ့ စုပျယူသနျ့စငျရမညျ ဖွဈပါသညျ။ ၃။ ဝိုငျအစှနျးအထငျးမြား ဝိုငျဖိတျစဉျကမြှုကွောငျ့ စှနျးထငျးမှုမြားဖွဈပျေါပါက ဆျောဒါရညျဖွငျ့ အစှနျးနရောတှငျ သုတျထားပွီး သနျ့ရှငျးသော အဝတျစဖွငျ့ စုပျယူပါ။ ထိုနညျးမှာ အမှနျတကယျ အလုပျဖွဈပါသညျ။ အကယျ၍ ထိုနညျးဖွငျ့လညျး အစှနျးမကြှတျပါက ရှာလကာရညျ လဘကျရညျတဈဇှနျးနှငျ့ ဆပျပွာမှုနျ့ လဘကျရညျတဈဇှနျးတို့ကို ရအေေးဖွငျ့ရောစပျပါ။ အဆိုပါ ရောစပျအရညျဖွငျ့ အစှနျးနရောကို သနျ့ရှငျးသော အဝတျစဖွငျ့ တို့ပေးပွီး ရသေနျ့ဖွငျ့ ပွနျလညျဆေးကွောလိုကျရမညျ ဖွဈပါသညျ။
၄။ ဘီယာနှငျ့ ကျောဖီအစှနျးအထငျးမြား
ဘီယာစှနျးပခွေငျးမြားအတှကျ ဦးစှာအားဖွငျ့ အစှနျးထငျးနရောကို ရခေဲတုံးငယျဖွငျ့ ပှတျပေးပါ။ ယငျးနောကျ ဆပျပွာရညျ လဘကျရညျတဈဇှနျးခနျ့ကို ရနှေေးဖွငျ့ရောစပျကာ တဈသြှူးစက်ကူဖွငျ့ သုတျပေးရမညျ ဖွဈပါသညျ။ ကျောဖီအစှနျးအထငျးမြားအတှကျလညျး အဆိုပါနညျးစနဈအတိုငျး သနျ့ရှငျးပေးနိုငျပွီး ကျောဖီတှငျမူ ရခေဲဖွငျ့ ပှတျပေးသညျ့အဆငျ့ကို ခနျြထားနိုငျပါသညျ။
ဆိုဖာမြားပျေါတှငျ မငျစှနျးထငျးခွငျးဖွဈပျေါပါက ဦးစှာအားဖွငျ့ စှနျးပသေညျ့နရောကို အရကျပြံလောငျးပေးပါ။ ပွီးလြှငျ စှနျးပနေသေော အကှကျနရောကို သနျ့ရှငျးသောအဝတျစ၊ တဈသြှူးစက်ကူဖွငျ့ စုပျယူရမညျဖွဈပွီး အပွငျအစပျနရောမှ စတငျကာ အစှနျး၏ အလယျဗဟိုဘကျသို့ တိုးလာရမညျ ဖွဈသညျ။ အကယျ၍ သငျ့တှငျ အခွောကျလြှျောသညျ့ ဆေးရညျရှိပါကလညျး အဆိုပါဆေးရညျကို အသုံးပွုနိုငျပါသညျ။ မညျသညျ့ဆေးရညျကို သုံးသညျဖွဈစေ သတိပွုရမညျမှာ အစှနျးကှကျကို ပှတျတိုကျခွငျးမပွုရနျ သတိပွုရမညျဖွဈပွီး ပှတျတိုကျလိုကျပါက မငျမြား ပိုမိုပြံ့နှံ့သှားမညျ ဖွဈသညျ။
၆။ အိမျမှေးတိရ စ်ဆာနျမြား အညဈအကွေးစှနျ့သှားခွငျး
ရနှေငျ့ ရှာလကာရညျကို တဈဝကျစီရောစပျကာ အစှနျးအထငျးနရောကို အဝတျစုတျဖွငျ့ တို့ကာ စုပျယူပေးပါ။ စိုထိုငျးမှု မြားစှာလြော့ကသြှားသညျအထိ စုပျယူသနျ့ရှငျးပေးရမညျဖွဈသညျ။ ယငျးနောကျ အစှနျးအထငျးဖွဈခဲ့သောနရောပျေါတှငျ မုနျ့ဖုနျဆျောဒါ ဖွူးထားလိုကျပါက အနံ့အသကျမြားကို စုပျယူဖယျရှားပေးနိုငျမညျ ဖွဈသညျ။ အစှနျးနရော ခွောကျသှသှေ့ားပါက ဖုနျစုပျစကျဖွငျ့ ဆျောဒါမှုနျ့မြားကို သနျ့ရှငျးပေးလိုကျပါ။
စားကျက်မြေကို ဘယ်သူထိန်းသိမ်းသလဲ။ ကျူးကျော်နေထိုင်မည်ဆိုလျှင် ?
သက်တမ်းကုန်နေသည့် ဂရန်မြေကို အမွေဆက်ခံပိုင်ခွင့်ရှိသလားဆိုလျှင်
၀ယ်ယူထားသည့်မြေပေါ်တွင် ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခြင်းအတွက် ဆောင်ရွက်ရန်
မြေငှားဂရန်(မြေငှားစာချုပ်) မူရင်း ပျောက်ဆုံး၊ ပျက်စီးသွားသည်ဆိုလျှင် မည်သို့ဆက်လုပ်မလဲ?
အိမ်ခြံမြေတိုက်ခန်းဝယ်တဲ့အခါ အရေးကြီးဆုံးက ဘယ်သူလဲ…?
အခွန်လွတ်မြေဂရန် (သို့မဟုတ်) သာသနာ့ဂရန် လျှောက်ထားမယ်ဆိုလျှင်
ဒီလို ရောင်းဝယ်နေကြသည့် တန်ဖိုးနည်း၊ တန်ဖိုးသင့် အိမ်ရာတိုက်ခန်းများ
စရန်ငွေပေးပြီးမှ ရောင်းသူ အိမ်မြေပိုင် ကွယ်လွန်သွားလျှင်
(၁၂) လရာသီဖွားများအတွက် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အိမ်ခြံမြေ ကံကြမ္မာဟောကိန်း
ရနျကငျး ကြောကျကုနျး မဂ်ဂငျလမျး တိုကျခနျး...
640 သိန်း (ကျပ်)
တိုကျခနျးအငှား - စမျးခြောငျး နရောကောငျး
သင်္ဃန်းကျွန်း ၅လွှာထပ်ခိုးပါ တိုက်ခန်းသန့်...
15'x35' land for rent, နနျးရှစြေ့ေးအနီး, 21st street, between 61x62 street